PUBG MOBILE 1.5 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
3.9 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（596.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် PUBG MOBILE 1.5: IGNITION
တရားဝင် plassunterunknown ၏စစ်မြေပြင်သည်မိုဘိုင်းအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချိန်မရွေးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအခမဲ့ကစားပါ။ Pubg Mobile သည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အခမဲ့ -to-to-plup multiplayer အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ Drop, Gear up နှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ EPIC 100 ကစားသမားဂန္ထဝင်တိုက်ပွဲများ, payload mode နှင့် fast-paced 4v4 အသင်းသေဆုံးမှုနှင့်ဖုတ်ကောင် Modes နှင့် zombie mode များ။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ Duty Calls Calls Calls Foot!
မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အခမဲ့ - လက်တွေ့အခမဲ့အင်ဂျင်ဖြင့်ပါ0င်သည်။ JAW-dropping HD ဂရပ်ဖစ်နှင့် 3D အသံများကိုပေးပို့သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောမိုဘိုင်းထိန်းချုပ်မှုများ, လေ့ကျင့်ရေးစနစ်များနှင့်အသံချက်တင်ပါ။ မိုဘိုင်းပေါ်ရှိအချောဆုံးသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်လက်တွေ့ကျကျလက်တွေ့ကျသည့်စံပြများဖြစ်သော Mobramel မှ Miramar မှ Miramar မှ Miramar သို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ နှင့် dynaman ရာသီဥတု - မြို့ပြမြို့နေရာမှအေးခဲနေသော Tundra မှတောနက်ထဲမှတောနက်ထဲမှအ0တ်လွှာများအနေဖြင့်အနိုင်ရရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုပြုလုပ်ရန် Mower ။
ကစားသမား 100 ဂန္ထဝင် mode ကို - Payment Classic Mode မှ Payload Mode, Lightning-Fast Arcade နှင့် 4V4 Team Deathmatch Modes များ, - ကစားသမားများ။ သင်၏လက်နက်ကိုသင်၏နှလုံးသားထဲသို့ပစ်ပါ။ Lone ဝံပုလွေစစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်မျိုးနွယ်စုများနှင့်ကစားပါ။ အကူအညီလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်တာဝန်ခေါ်ဆိုမှုများကိုဖြေပါ။ ဂိမ်းတွင် TPS (ပထမလူသေနတ်သမား) နှင့် TPS (တတိယပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမား) နှင့်ကစားနည်းများအားလုံးနှင့်အာဆင်နယ်အသင်း၏အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အာဆင်နယ်အသင်း၏အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကားများများကစားသည်။ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောစီးနင်းမှုနှင့်အပိုင်းပိုင်းကိုနောက်ဆုံးစက်ဝိုင်းသို့စီးနင်းရန်ရှာပါ။
အမြဲတမ်းကြီးထွားလာနေသည့်နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့် Pubg Mobile ကိုအမြဲတမ်းကြီးထွားလာပြီးတိုးချဲ့နေသည့်ဂိမ်းအသစ်များနှင့် mode အသစ်များပေးပို့ခြင်းလစဉ်နောက်ဆုံးသတင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်။ ပြင်းထန်သောလှည့်စားခြင်းယန္တရားများသည်တရားမျှတသောမျှတသောကစားခြင်းဆိုင်ရာဝန်းကျင်ရှိမျှတပြီးမျှတသောဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာစေသည်။
* Pubg Mobile Movement System လိုအပ်ချက်များ - Android 5.1.1 အထက်နှင့်အနည်းဆုံး2GB မှတ်ဉာဏ်။ အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် Pubg Mobile Lite ကိုစမ်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Facebook: facebook: https://www.facebook.com/pubgmobile
twitter: twitter: https://twubgmobile > Reddit: https://www.reddit.com/r/pubgmobile/
Discord: https: //discord.gg/pubgm.
သင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို pubgmobile_tencentgame.com တွင်ဆက်သွယ်ပါ မေးခွန်းများရှိပါသလား။
ဘာအသစ်လဲ PUBG MOBILE 1.5: IGNITION 1.9.0
i'm Like PUBG